Odayaasha Gobolka Bari oo beeniyay inay adeegsanayso Dowladda Federaalka | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Odayaasha Gobolka Bari oo beeniyay inay adeegsanayso Dowladda Federaalka
Odayaasha Gobolka Bari oo beeniyay inay adeegsanayso Dowladda Federaalka
Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Bari ee ka careysan siyaasadda ay ku shaqayso Puntland ayaa waxay iska fogeeyaan eedeymaha Puntland ka soo yeeray ee ah inay dhabarka ka riixeyso Dowladda Federaalka Somaliya.
Cali Xasan Axmed (Sabarey), Wasiirka Warfaafinta Puntland ayaa Talaadadii sheegay Odayaasha Gobolka Bari inay ka shidaal qaadanayan Dowladda Federaalka Somaliya, sidaasina ay culeyska ku saarayan Maamulka Puntland.
Caaqil Abshir Maxamed Xaaji Cali oo u hadlay Odayaasha Gobolka Bari ayaa wuxuu waxba kama jiraan ku sheegay inay adeegsanayso Dowladda Federaalka, balse ay ka biyo diidan yihiin heshiisyada aan la cadayn, ee Maamulka Puntland uu la galay shirkadaha lagu wareejiyay Dekeda iyo Garoonka Boosaaso.
Caaqil Abshir Maxamed Xaaji Cali ayaa ku waramaya Odayaasha Dhaqanka ee lagu xir xiray Magaalada Boosaaso inay yihiin kuwii soo dhisay Maamulka Puntland, isla-markaana aanu ujeedkoodu ahayn in la burburiyo maamulka.
Wuxuu sheegay in Gobolka Bari ay deggaan beelaha ugu badan ee degga Puntland, kuwa hadda cabanaayana ay yihiin beelihii qaybta ka ahaa in la dhiso Maamulka Puntland.
“Gobolka Bari beelaha ugu badan baa degan, waxa cabanaya ee qaylinaya waa dhaqankii deganaa, odayaashii, waxgaradkii, aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii baa hadleysa.” Ayuu yiri Caaqil Abshir Maxamed Xaaji Cali oo la hadlay BBC.
Waxa uu intaa ku daray “Waxay ka cabanayaan waa waxay umadda aragto. Dowlado ayaa burburinaya Somaliya oo fara-gelin ku wada, oo kuwa kan maamulka aan hadda ka cabanayno dabada ka soo riixaya.”
“Maamulkii aan dhisnay hadduu khaldamo, qaabkan ugu talagalnay ee ahayd inay dalka ilaaliyaan, umadana ay si daacada ugu shaqeeyaan, haddii ay ka soo bixi waayaan, kuwii sixi lahaa waa anaga. Waayo anaga dhaqankii baanu nahay, dhaqankana Somaliya wuxuu ka ahay aas aasayaasha xukuumadda ama dowladda.” Ayuu yiri Caaqi Abshir Maxamed Xaaji.
Mar la weydiiyay sababta ay maamulka ugu madax bannaanayn waayeen heshiisyada uu gelaayo ayaa wuxuu sheegay in Puntland ay tahay maamul hoos-tagga Dowladda Federaalka, isla-markaana aanay geli karin heshiisyo caalami ah, waxa uu intaa raaciyay in Puntland ay noqotay maamul la iibsan karo.
“Puntland waa maamul, maamulkuna wuxuu hoos-taggaa Dowladda Federaalka, maamulka heshiis caalamiya ma geli karo. Waxaan leenahay baarlamaan iyo maamul hoose, maamulka hoosena wuxuu noqday wax la kala iibsado.” Ayuu yiri Caaqilka.
Caaqilka ayaa hoosta ka xariiqay haddii Madaxdii Puntland ay diideen inay la shaqeeyan Dowladda Federaalka, maamulkuna uu noqday mid wax khalda, inay iyagu arrimahaasi uga wakiil yihiin shacabka, sidii loo sixi lahaa.
“Dowladdii Federaalka oo Dowladdii Dhexe ahayd ay ku xirmi lahaayeen haddii ay diideen, iyagiina ay wax khaldayaan, shacabkii anagaa uga wakiil ah toosinteeda.” Ayuu yiri Caaqilka.
Su’aal ahayd waxa ka jira in qaylo dhaantooda ay la xiriirto taageero dibadda ay ka helayan ayuu taasi meesha ka saaray, waxa ay u qaylinayaana ay tahay badbaadinta dalka.
“Anaga dibadda nalaga soo riixi maayo, shacabka iyo umadda dalka degan way ina arkaan waxa aan u taaganahay inay tahay xaq, kuwa dalka iibsadayna waa maamulka, hadana aan u daba fadhinaa oo joojiya leenahay.” Ayuu yiri Caaqil Abshir Maxamed.
Caaqilka ayaa yiri “Dhawaaqa inaga yeeraya waa ilaalinta dadkayagii iyo dalkayagii oo aan ilaashanayno, kuwa dabada laga soo riixayana waa iyaga.”
Sabtidii illaa iyo Isniintii ayaa waxaa Magaalada Boosaaso lagu xiray, lix ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Bari, ee diiday heshiiska Puntland iyo shirkadaha laga leeyahay dalka Emirate-ka Carabta. Waxaa xusid mudan in nin kaloo siyaasi ah loo xiray diidmadaasi.